काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न दलका नेताले राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि वर्तमान सरकार सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई करीव दुई तिहाइ मत दिएकाले उनीहरुले ठूलो छाती गरेर सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिए । राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले लडाइँ र झगडाको युग समाप्त गर्न सबै पक्ष इमान्दार भएर लाग्नुपर्ने तथा सबै पक्षको माग र असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । नेता महतोले भने, “हामी पनि लडाइँ झगडाको युग समाप्त गर्न चाहन्छौँ तर कार्पेटभित्र छोपेर राखिएको फोहर नहटाई कसरी मुलुक समृद्ध हुन सक्छ ? असन्तुष्टि कसरी सम्बोधन हुन सक्छ?”
प्रकृतिले नेपाललाई दिएको ठूलो वरदानको उचित प्रयोग गरेर आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने विचार उनको थियो । उनले हिमाली, पहाडी तथा तराईका जनताको आफ्नो राष्ट्रप्रति उत्तिकै चिन्ता चासो तथा सम्मान रहेको छ भन्दै सबैलाई मिलाएर लैजान नेतृत्व गर्नेले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले संविधानलाई धर्मग्रन्थ नबनाउन आग्रह गर्दै जनताको मागअनुसार संशोधन गरेर असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर लैजान वर्तमान सरकार सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान गतिशील राजनीतिक दस्तावेज भएकाले यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । संविधानमा संघीयता र धर्म निरपेक्षतालगायत केही राम्रा पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायमा समान पहुँच र अनुभूति गर्न नपाएका समुदायले अपनत्व महसुस गर्नेखालको संविधान बनाउन यसको संशोधन जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ती विषयमा सबैको समान मत भए मात्रै मुलुक समृद्ध बन्न सक्ने धारणा राखे । बन्द भएका उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्ने र नयाँ उद्योगधन्दाको स्थापनाका लागि सामूहिक प्रयत्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण जरुरी रहेको बताए । नेमकिपाका प्रेम सुवालले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि घुसखोरी र कमिसनखोरी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने, विद्युत् खरिद गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने र स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै रोजगारीको खोजीका लागि विदेशिने युवालाई यहीँ राख्न विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए ।
राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले वर्तमान सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भ्रष्टाचार देशको ठूलो रोग भएकाले अब भ्रष्टचार गर्नु भनेको आफ्नै आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर सबैले कम खानु पर्ने बताए। उनले भने पहिले जे भयो भयो अब सबैले मैले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर कसम खानुस्। मैले त चुनाव लड्दा देखिनै जनता समक्ष यो कसम खाइसकेको छु।
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन २२, २०७४१४:४८
पार्टीभित्र एकताको खाँचो : महामन्त्री डा कोइराला !
“कोहि पनि चिन्ता नलिनुस्, माधव नेपालसँग मेरो २९ सालदेखिको अनुभव छ” -ओली